Akpaaka: Ngwaọrụ dị maka ọrụ nke SysAdmin | Site na Linux
Maka ndị dị adị ma ọ bụ na mbụ Ndị nchịkwa Sistem / Server (SysAdmins) N'oge ụfọdụ na ọrụ aka ha, na ụlọ ọrụ ọha ma ọ bụ nkeonwe ma ọ bụ nzukọ, o doro anya na, iji bụrụ ọkachamara pụrụ iche n'ọnọdụ ahụ, ọ bụ Ọ dị mkpa ịzụlite ma nweta ụfọdụ nkà na omume, na-enye ha ohere ịrụ ọrụ rụọ ọrụ nke ọma ma rụọ ọrụ nke ọma.
Karịsịa ndị ahụ, nke na-enye ha ohere isoro ọnụ ọgụgụ buru ibu nke iche iche ndokwa ihe omume ma ọ bụ na ọ bụghị, na ha na-elekọta omenala, na ha ga-esoriri, dozie ma ọ bụ ịga, na-ebelata nnweta ha iji nyere aka dozie ihe ọ bụla ọzọ IT IT omume ikpeazụ nkeji. Ya mere, ihe ọma SysAdmins ha na-achọ machiini ihe niile aga-eme, ihe omume, usoro ma ọ bụ omume ga-ekwe omume site na ngwanrọ ngwanrọ dị n'ubi gị.
SysAdmin: Nka nke ịbụ sistemụ na Onye nchịkwa Server
Na nke a, anyị agaghị abanye n'ime njirimara, ọrụ ma ọ bụ ihe ọmụma, nke aghaghi inwe a SysAdmin,, ebe ọ bụ na anyị emepeworị mpaghara a na posts ndị gara aga, nke anyị na-akwado gụchaa, na nke bụ ndị na-esonụ:
Sysadmin: Nkà nke ịbụ Sistem na Onye Nchịkwa Sava
DevOps na SysAdmin: Ndị mgba ma ọ bụ ndị na-emekọ ihe ọnụ?
Mana site na ndenye ndị a, o doro anyị anya na:
"Ezigbo SysAdmins na-enwe nghọta bụ isi banyere mmemme ma ọ bụ mgbagha mmemme. Ha na-enwekarị ezigbo nghọta maka akparamagwa nke ụfọdụ ịkparịta ụka n'orntanet ma ọ bụ ngwaọrụ nkwukọrịta na ngwanrọ metụtara ya iji mejuputa ma dozie nsogbu ahụ. Ha na-adịkarị mma na asụsụ mmemme dị iche iche eji ede ma ọ bụ na-akpaghị aka ọrụ oge niile dịka Shell, AWK, Perl, Python, na ndị ọzọ.".
1 Ngwaọrụ akpaaka maka SysAdmins
1.2 Ngwaọrụ ndị ọzọ
Ngwaọrụ akpaaka maka SysAdmins
N'ime ihe ndị a, anyị ga-ekwupụta ma kọwaa ụfọdụ n'ime ihe ndị ga-ekwe omume ngwanrọ ngwanrọ kedu ihe ọma SysAdmin nwere ike iji maka machiini ihe niile enwere ike akpaghị aka:
Ihe a na-enweta bụ ngwa ọrụ emeghe eji maka inye ngwanrọ, ntinye ngwa, nhazi, nhazi, na nchịkwa. Ebumnuche ya bụ inyere gị aka ịmezi usoro nhazi gị ma mee ka nlekọta nke usoro dị mfe.
Ansible na-enye kọmputa akpaaka site na faịlụ nhazi nhazi di nfe. Ọ dakọtara na ihe niile Linux, Mac na Windows njikwa ngwugwu. Usoro ya dịtụ iche na akpaaka omenala nke enwere ike mụta n'oge gara aga na ngwaọrụ sọftụwia ndị ọzọ.
Dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-ede a shei edemede Iji mezuo ọrụ, ị na-atụkarịkarị anya n'usoro ahụ, jiri iwu na-enye iwu. EziokwuOtú ọ dị, na-emekọ banyere steeti igwe ahụ, na-akọwapụta ihe na SysAdmin ma ọ bụ ndị ọrụ IT, ọtụtụ usoro achọrọ iji ruo otu ọnọdụ ma ọ bụ ihe.
Matakwu banyere otú Ansible na-arụ ọrụ, ị nwere ike ịga leta gị ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị na / ma ọ bụ ihe ndị a njikọ.
Maka ndị ahụ SysAdmins ma ọ bụ ndị ọrụ IT onye na-enweghị ike ịdabere na iji Ansible, karịsịa na Sistemụ arụmọrụ na-emeghe ma na-emegheDị ka Linux na BSD, ịnwere ike iji ngwa ọrụ sọftụwia ndị a na - akwụghị ụgwọ ma mepere emepe, ndị etinyegoro ma ọ bụ kwado ha,
Shell Scripts ma ọ bụ Shell Scripting
Cron na Crontab
N'ikpeazụ, cheta na:
Ọ dị mma SysAdmin mara na mgbe teknụzụ ghọtara nke ọma na ọ ga-akpaghị aka. Karịsịa, n'ihi na teknụzụ ọhụụ na-apụta kwa afọ. Ma mgbe ọ nwere akpaghị aka ọrụ ma ọ bụ usoro gara aga, enwere oge imuta ihe ohuru, nke nwere ike mechaa rụọ ọrụ akpaghị aka.
Ọzọkwa, automate na-eme ka uche n'ihi na kọmputa dị mma na ntụkwasị obi na usoro ugboro ugboro karịa mmadụ. Nke na-eme machiini Oké osimiri a nnọọ ewu ewu lekwasịrị anya na Mpaghara IT. N'ihi ya, a na-enweta ngwaọrụ mgbe niile akpaaka.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere ụfọdụ ngwaọrụ software dị mkpa maka «Automatizar tareas TI» maka «SysAdmins», otu nke eji faịlụ nke ndokwa ọrụ ala Shell Akwụkwọ Nsọ ma ọ bụ Azịza, nwee nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Na-atụ aro » Akpaaka: Ngwaọrụ dị maka ọrụ nke SysAdmin
Ọ dị ezigbo mma !
ọ mara oke mma !